iwe unofanirwa kudzima anozivikanwa kwazvo maapplication eapps vasati vapa foni yako isingagone kushandiswa
Kuru Nhau & Ongororo Iwe unofanirwa kudzima anozivikanwa kwazvo maapplication eApple vasati vapa foni yako isingagone kushandiswa
Rimwe zuva, mumwe mushumo unonetsa rakaburitswa neimwezve yakasimba cybersecurity ku yambira vashandisi veApple yenjodzi ichangobva kuwanikwa yakavanda mumimvuri ye Play Store, pamwe nekukurudzira chero munhu angave akawirwa ne 'adware wave' yemwedzi mishoma yapfuura kuti akurumidze kubvisa dambudziko iri.
Ehezve, yakaipa adware chiitiko hachisi chitsva, ichive chiri kwese pasirese & apos; s inonyanya kufarirwa nharembozha software papuratifomu chero bedzi isu tichigona kurangarira, asi iyo 21 maapplication eApple anonzi uye anonyadzisa naantivirus anovandudza Avast kutanga kwesvondo rino vari munzvimbo inoonekera (yezvikonzero zvese zvisirizvo) kekutanga nguva.
Delete aya maap-akazara maapps ASAP
Tisati tatombopinda muzvikonzero nei uchifanira kugara kure nekukwanisika kubva pamakumi maviri nemaviri anotsausa mazita eGoogle Play akanangidzirwa neAvast & apos; vaongorori mushure mekunyatsoongorora maitiro avo nekubatana nemazana evanoongorora, chinhu chakakosha kuita hapana mubvunzo rongedza iwo makumi maviri neshanu maapplication epasirese kuti aone. Pasina imwezve ado, hezvino ese ari, akarairwa nekuzivikanwa:
Helicopter Attack - Nyowani
Assassin Nhoroondo - 2020 Nyowani
Tsvaga 5 Misiyano - 2020 Nyowani
Tsvaga Misiyano - Puzzle Game
Kirimu Rwendo - Nyowani
Iye zvino zvaunoziva zvekudzivisa, unogona kunge uchizvibvunza kuti chii chakashata nemaapps eApple, mazhinji acho asingatarisi seanosemesa kana kufungira zvakanyanya pakutanga kuona, angangoita kumeso asina kudzidziswa evazhinji vatengi zvemukati zvevatengi. .
Meso akasarudzika akadzidziswa eanoverengeka eAvast cybersecurity nyanzvi dzakatarisa Play Store kune mireza tsvuku kechitatu mumwedzi mina chete nekukurumidza vakaona kuti boka rese rezviongororwa zvemapurogiramu akanyorwa pamusoro ataurwa kushambadza kweYouTube inosimudzira mashandiro akasiyana kubva vashandisi vamwe vakatora pakutsvaga mazita aya.
Mushure mekubata vanhu & apos; kutariswa nekunyepedzera kushambadzira, ivo vane mumvuri vagadziri veayo 21 yakaipa mitambo yakaziviswa mune iyi nyowani mushumo vanotanga kuputira vatengi vavo nemamwe ma ads, mazhinji acho akabuda kunze kweapurogiramu ivo pachavo, zvichiita kuti vapari vemhosva vakanyanya kuoma kusaroora. kunze.
Neraki, iyo & apos; s uko Avast inopinda, ine chinangwa chekubatsira iwe kuti uwanezve kutonga kwakazara kwehutachiona hwehutachiona uye kutsakatisa zvimwe zvinoshungurudza uye kazhinji zvakanyanya kushambadzira kushambadza kunoita kuti hupenyu hwako hunetseke nekunonoka kana kuvhara chaiko kupedzwa kwemabasa akakosha, pamwe nekudzora kazhinji. pasi system yako uye zvinokanganisa zvakanyanya ruzivo rwevashandisi.
Maitiro ekugara wakachengeteka mukufamba kwenguva
Chekutanga pane zvese, haufanire kumbotemba chete pa Google kukuchengetedza iwe kubva kune adware, rudzikunuro, spyware, uye ese mamwe marudzi ema trojans nemavirusi zvinowanzo kukonzera mhirizhonga kuGoogle Play Store.
Iyo hofori yekutsvaga haisi kungoita zvakakwana kudzivirira uku kutyisidzira kuti kupinde mukati uye kunyanya kuvabvisa pasina tsitsi kana kunonoka. Nyaya iripo, kubvarura gumi nemashanu emaapp mairi makumi maviri neshanu akanyorwa pamusoro apa achiri mupenyu uye achirova panguva yekunyora uku, kunyangwe kune izvo zvinokosheswa nemaapos, nhamba iyoyo yakadzikiswa kubva pa19 pakaburitswa mushumo pakutanga.
Chimwe chinhu chausingafanire kuvimba nacho ndeyekuisa app & apos. Huwandu hwekurodha pasi kweGoogle Play hakuwanzo kumiririra kuvimbika kweapp & apos, sezvakaratidzwa nemamirioni masere zvakapetwa aya maapp ma21 akaiswa pane nharembozha pasirese apo Avast yakaburitsa zvayakawana. Panguva ino, Rolling Scroll uye Helicopter Attack - Nyowani inoita kunge yakabatana navo Shoot Them uye Crush Car mumamirioni + kurodha kirabhu, saka ehe, zvinoita kunge anozivikanwa maapplication anogona kuve nengozi zvakare.
Pane kudaro, izvo zvaunofanira kunyatsoteerera usati waisa Anwendung pafoni yako yeApple ndiwo ongororo yemushandisi. Chero chipi zvacho chine yakawanda-shanu-nyeredzi uye 1-nyeredzi ratings ingangove yakaipa. Chero chipi zvacho chine avhareji isingasviki nyeredzi nhatu chine njodzi kana kuti hachina kukodzera nguva yako.
Imwe inogona kunge iri tsvuku mureza ndeye yekuvandudza account ine imwechete app kune zita rayo, iyo inogona kuratidza kuti munhu kana kambani iri kumashure kwezvauri & apos; irikuyedza kurodha pasi inomhanya akawanda maakaundi, nokudaro ichidzivirira yavo yakaipa bhizinesi kupokana neGoogle kupamba uko dzimwe nguva kunopera nekubviswa. profiles.
Zvinosuruvarisa, haungambove wakadzivirirwa zana kubva pamhando dzese dze malware, kunyangwe uchichenjerera zvakadii, asi izvozvo hazvireve kuti haufanire kuedza kudzivisa kutyisidzira kuri pachena kunze uko.
Iyo Pixel 3a ine headphone jack yekupa 'kuchinjika', asi usape & apos; usawane tariro yako kumusoro kwePixel 4
Iwe haugone & kuchaja iyo iPhone 7 uye teerera kumumhanzi, uchave uchienda isina waya?